Amasayithi e-Armenian Online Casino | Amakhodi E-inthanethi e-Casino
(534 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Ukugembula okuku-inthanethi e-Armenia kuvunyelwe futhi kuyachuma, njengoba zonke izinhlobo zokugembula ku-Intanethi zisemthethweni ngokusemthethweni ngaphansi komthetho wokugembula okuku-inthanethi kwe-Armenia. Elizweni kukhona bobabili abaqhubi be-intanethi abasebenza ngaphansi kwelayisense yombuso, nabangaphandle.
Njengoba izakhamuzi eziningi zase-Armenia zikhuluma isiRussia, zingakwazi ukugembula inthanethi kwizingosi zokugembula ezithengiswayo ezisezintabeni ezinikeza izinkonzo zazo ngesiRashiya. Kodwa-ke, amasayithi angaphandle kwezinye izilimi nawo ayenziwa phakathi kwama-gamers ase-Armenia. Hambayo ukugembula futhi ethandwa kakhulu e-Armenia, njengoba izinga lobunikazi bamadivayisi ahlukahlukene ephathekayo likhula njalo. Siyabona ekhathalogu yethu ye-inthanethi yokugembula ukuthi jikelele izwe lihle kakhulu ekuthuthukiseni ukugembula komhlaba kanye nokugembula.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 ze-Armenian Online ze-Casino
Umlando wezokugembula wase-Armenia ubuyela emuva kwekhulu le-20th. E-1936 Armenia yaba yiRepublic Soviet. Izinhlobo kuphela zomthetho zokugembula ezweni ngaleso sikhathi zazibheja emidlalweni naseLottery State. Empeleni, i-Armenia ingene embonini yokugembula ngemva kokuwa kweSoviet Union. Amahholo okugembula okuqala kuleli zwe avuleka ku-1990, futhi i-casino yokuqala ivele ku-1991.
Izakhiwo eziningi zokugembula zisebenza e-Armenia namuhla, kuhlanganise namahholo webhingo, amakhasino, abakhiqizi, njll. Konke kusebenza ngesisekelo samalayisense akhishwe yiMnyango Wezezimali weRiphabhuliki yase-Armenia. Enye yezinkampani zokugembula ezihola yi-Vivaro Betting, eyasungulwa ku-2008. Phakathi kwamanye amasheya emakethe kukhona Totto Gaming, Goodwin-Bet kanye Yntanekan Loto. Naphezu kokuphikiswa okukhulu kwabashayeli bezokugembula, ku-2014 iPhalamende lase-Armenia ladlulisela umthetho owavuma ukuthi wonke amakhasino ezweni kufanele abe ezindaweni zokuvakasha, njengeJermuk, Tsakhkadzor, Sevan, njll.
I-Armenia I-casino e-Online ne-Kamera
I-Armenia yizwe lokuqala futhi lasendulo elinombala ongenakulibaleka nemvelo ethakazelisayo. Ihlanganisa isimo sokucophelela ezimpandeni zomlando kanye nobuchwepheshe besimanje nobuchwepheshe obusha. Vele, ukuphumula e-Armenia, kufanelekile ukunambitha i-cognac enhle kakhulu emhlabeni nokuchitha isikhathi kumakhasino we-chic. AmaCasinoToplists anqume ukuthola ukuthi izinto zinjani ngempela ngokugembula e-Armenia yanamuhla online nasemakhasino asemhlabeni.
Amakhasino ase-Inthanethi avunyelwe ngokomthetho kuma-opharetha alayisensi e-Armenia;
Abasebenza ku-inthanethi bangaphandle ngaphandle kwelayisense okwamanje abavunyelwe. Ungadlala;
Njengamanje, umthethosivivinywa wokubambisana nokufinyelela kwamanye opharetha angaphandle uxoxwa;
Uma uqala, ngoba unemithetho emfushane yokuthi ungaqala kanjani ukudlala ku-intanethi;
Umlando nendawo ye-Armenia;
Amakhasino omhlaba adume kakhulu: "Senator", "Shangri La";
Amaqiniso anentshisekelo nge-Armenia nama-Armenia;
I-Armenia yizwe lokuqala futhi lasendulo elinombala ongenakulibaleka nemvelo ethakazelisayo. Ihlanganisa isimo sokucophelela ezimpandeni zomlando kanye nobuchwepheshe besimanje nobuchwepheshe obusha. Vele, ukuphumula e-Armenia, kufanelekile ukunambitha i-cognac enhle kakhulu emhlabeni nokuchitha isikhathi kumakhasino we-chic. Ama-CasinoToplists anqume ukuthola ukuthi izinto zinjani ngempela ngokugembula e-Armenia yanamuhla, ezweni nasemakhasino aku-inthanethi.
Imithetho yase-Armenia ngokugembula - isizinda somlando
1921 - 1928 I-Armenia iyingxenye yeZFSFR bese kuba yi-USSR. Ibhizinisi lokugembula ezweni livunyelwe. Kusukela ngo-1928, ukuvinjelwa kwendawo yonke ye-USSR.
1936 I-Armenia e-USSR njenge-republic yezinyunyana. Umjaho womjaho eYerevan nelotto kuvunyelwe.
1991 Umthetho Onelayisense: Isixazululo soMkhandlu Wongqongqoshe BaseRiphabhuliki yase-Armenia No. 161. Ukuvulwa kwekhasino lokuqala eYerevan. Amalayisense akhishwa nguMnyango Wezezimali.
1992 Umthetho ontela yentela -XUMUM% yemali ye-casino inikeza uhulumeni.
1998 Umthetho othi “On Payed Payments” - ukuhlela ukugembula ezweni kuba lula futhi kube nenzuzo enkulu.
2000 UMongameli Robert Kocharian usayine uMthetho No. 102 "Emidlalweni Yokuwina Nezindlu Zemidlalo” - umkhakha wezokugembula uyathuthuka futhi uyanda. Ilayisensi yokuvulwa kwendlu yokudlala noma ihholo lokudlala. Ungadlala kusuka eminyakeni engu-21.
2001 Umthetho "Ekulayisenseni" - ukuthola ilayisense kusekelwe ohlelweni oluyinkimbinkimbi, ukugembula kuncishisiwe.
2004 Umthetho "Emidlalweni enezindlu zokuwina nezokugembula." Imbuyiselo engaguquki yomshini we-slot ingama-86% .Ukuhamba kwekhasino enhlokodolobha yaseYerevan okungenani ama-50 km.
2016 - 2017 Izichibiyelo zomthetho emisebenzini. Ukukhuphuka kwezindleko zelayisense lababhuki be-inthanethi izikhathi ezingama-5 (kwakungu- $ 207,000, kwakungu- $ 1 million). Iphini. UNgqongqoshe Wezezimali wase-Armenia uPavel Safaryan wethule umthetho osalungiswa onikeza amalayisense imisebenzi yabangaphandle yokugembula ku-inthanethi. Okwamanje umthetho usacutshungulwa.
Uma udlala ekhasino eku-inthanethi e-Armenia, elinelayisense elisemthethweni laleli zwe - umsebenzi wakho usemthethweni ngokuphelele.
Ungadlala kumasayithi opharetha bakwamanye amazwe, ngoba lokhu akuvunyelwe okwamanje futhi akulandelwa empeleni. Ngakho-ke, ungakhetha noma iyiphi ikhasino enelayisense esemthethweni yomhlaba wonke.
Uma umthetho wokulayisensa ama-opharetha angaphandle usazokwamukelwa, kungenzeka ukuthi ukufinyelela kuma-casino angaphandle ngaphandle kwelayisensi ehambisanayo kuzovalwa.
Ukuphela kwengxoxo mayelana nokulayiseniswa kwama-casino angaphandle akukacaci, kepha ngenkathi noma yiyiphi i-Armenia ingayithokozela ngokudlala kuma-casino ayithandayo kuyi-intanethi futhi ungesabi ukuthi ukufinyelela kuzovalwa futhi ngeke akwazi ukuthola ama-winnings.
Ungaqala kanjani ukudlala i-casino e-inthanethi e-Armenia?
Khetha ikhasino . Umbandela oyinhloko ukuthembeka, ilayisense nokubuyekezwa okuhle. Sincoma ikhasino, ephumelele isivivinyo - ukwenza lokhu, naka ikholomu engakwesokudla.
Sifunda ngokucophelela i-casino . Uma uthatha isinqumo sokudlalela imali, kufanele uqale uthole ngamalungelo nemithetho yakho. Yonke imininingwane isezindaweni eziku-inthanethi zamakhasino kusizinda somphakathi. Naka ngokukhethekile la maphuzu alandelayo:
Ukutholakala kwelayisensi, amakheli kanye noxhumana nabo bekhasino (ucingo, ingxoxo);
Ukubuyekezwa kwabadlali kunethiwekhi (kufanele kube okuhle nokubi, uma kungenjalo kungenzeka kube yi-PR, noma okubizwa nge- "black" PR;
Imibandela yamabhonasi nokubheja. Kuyini ukubheja, ungathola lapha.
Umbuzo wemali . Ikhasino ngalinye langaphandle linikeza izinketho eziningi zokufaka nokukhipha izimali.Chaza, ngabe kukhona phakathi kwabo lokho okungakulungela. Naka imali lapho umdlalo ungadlalwa khona. Futhi unake imigomo nemibandela yokuhoxiswa kwe-win (amanye amakhasino kuma-winnings amakhulu adlulisela imali ezingxenyeni ezithile).
Izintandokazi zomuntu siqu :
Ukuklama kweCasino nokuhamba okulula;
Ukuba khona kwemidlalo ezithakazelisayo;
Ngidinga ukulanda isofthiwe futhi yiziphi izici zobuchwepheshe bekhompyutha?
Kungenzeka yini ukudlala mahhala kumodi yokuhlola?
Uhlelo lokuthembeka kumakhasimende - amabhonasi, ukubuyiselwa kwemali nokunye.
Sincoma ukudlala kuqala kumodi yokuhlola futhi ufunde ngokucophelela imithetho yomdlalo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emidlalweni yamakhadi (i-baccarara, i-blackjack, njll.).
Sikukhumbuza ukuthi emabangeni amade ikhasino ihlala inqoba, kepha uhlala unethuba lokuchitha isikhathi esithandekayo futhi, mhlawumbe, uzoba nenhlanhla. Ukuze ulawule kangcono i-bankroll yakho futhi wandise ubumnandi bomdlalo, funda isigaba sethu kumasistimu namasu wegeyimu.
Amakhasino adume kakhulu e-Armenia
E-Armenia, kunamakhasino okunethezeka ahlinzeka izivakashi ngayo yonke imibandela yomdlalo okhululekile nokunye okuningi. Izinguquko zakamuva emthethweni azizange zisiguqule lesi simo.
Izindlu ezinhle kakhulu zokugembula zisebenza ngaphandle kwe-Yerevan, itholakala eceleni komgwaqo oholela esibhedlela sezindiza seZimbabwe.
Amakhasino “Senator” iyindawo yokuzijabulisa lapho kukhona ikhasino, indawo yokudlela, iklabhu nebha yokuphumula. Uhlelo lwangempela lombukiso luhlelelwe izivakashi. Njalo ngoMgqibelo kuba nemibuthano. Ku "Senator" ungadlala i-roulette, i-blackjack, izinhlobo ezahlukahlukene zemishini ye-poker neye-slot.
I-Shangri La Casino ingamakhilomitha ama-2 ukusuka emikhawulweni yedolobha elikhulu. Lesi sikhungo sigcina ibha yezindawo ezihlonipheka kakhulu, inikezela ngezinsizakalo ezingeni lamazinga omhlaba: inqwaba yamatafula okudlala, amahholo e-VIP, amakhulukhulu ezindawo zanamuhla, imigoqo emithathu, indawo yokudlela ene-cuisine yase-Armenia neyamazwekazi. Imicimbi ejwayelekile namahlaya ayenziwa.
Ziyanda, izikhungo ezisusa zonke izinkathazo zabadlali. Esikhathini esingengakanani esidlule waqala ukuvela junket izinkambo. Izivakashi zekhasino azinikezwa inani elithile lediphozi hhayi kuphela ukudluliswa, indawo yokuhlala kanye nenombolo ethile yamachips, kepha nohlelo lokucebisa olunothile.
Indawo yase-Armenia kanye nesizinda somlando omfushane
IRiphabhliki yase-Armenia yindawo encane nganoma yikuphi okulinganiselwe, insimu iphathelene namakhilomitha ayizinkulungwane eziyizinkulungwane ezingu-30, futhi inani labantu lingaphezu kwezigidi ezingu-3. Kodwa yeka ukuthi kucebile kangakanani umlando wale ngqungquthela yeplanethi!
I-Armenia itholakala e-Near East, eTranscaucasia. Omakhelwane abaseduze bezwe yiGeorgia, Azerbaijan, Turkey, Iran, Nagorno-Karabakh. Inhlokodolobha i-Yerevan, ulimi lombuso yi-Armenia, kepha cishe wonke umuntu ukhuluma kahle isiRussia.
Indawo ye-Armenia iphumelele ngokumangazayo, imikhondo yokuqala yokuhlala isukela esikhathini seminyaka eyizigidi eziyi-1.9 edlule. IGreat Armenia yayikhona ebalazweni likaHerodotus. Emakhulwini amaningi eminyaka, le ndawo yayiyingxenye yezifundazwe nemibuso ehlukahlukene, kepha imingcele yayo yanamuhla izwe lathola kuphela ngekhulu lama-1991. Ngo-XNUMX i-Armenia yaba umbuso ozimele - i-republic republic.
I-Armenia ebalazweni lase-Asia
Matenadaran . Ikheli: 53 Mashtots Avenue, Yerevan 0009, Armenia.
Ipaki labathandi . Ikheli: 21 Marshal Baghramyan Ave, Yerevan 0019, Armenia.
I-Blue Mosque . Ikheli: I-12 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015, Armenia.
I-National History Museum yase-Armenia . Ikheli: 4 Republic Square, Yerevan, Armenia.
Victory Park . Ikheli: I-Azatutyan Ave, Yerevan, Armenia.
Amaqiniso anentshisekelo nge-Armenia nama-Armenia
I-Armenia yizwe lokuqala emhlabeni ukwamukela ubuKristu njengenkolo yombuso.
Ulimi Armenian kungokwalabo iqembu ekhethekile izilimi - Paleobalkan. Okuwukuphela kolimi oluphilayo, oluhlobene nesiGreki.
Izinhlamvu zama-Armenia zivele ngaphambi kwezinhlamvu zesiCyrillic. Ngo-406 yadalwa nguMesrop Mashtots, futhi ithathwa njengenye yeziphelele kakhulu emhlabeni (kanye neKorea nesiGeorgia).
INtaba i-Ararat ifanekisela i-Armenia, kodwa kusukela i-1921 itholakala ensimini yeTurkey.
Ama-apula ase-Armenia yigama elivamile lamabhilikosi aseYurophu.
I-Armenia yindawo yokuzalwa yabaphathi abakhulu. Abaphathi bezimpi abangaphezu kwama-80 baseByzantium babengama-Armenia. Futhi idolobhana elilodwa lanikeza ojenene abangu-2 base-USSR namaqhawe ayi-11 eSoviet Union.
I-Casino yase-Armenia, izikhungo ezingcono kakhulu zokugembula e-Armenia
Izwe ngalinye lihle ngendlela yalo, futhi kulowo nalowo kuwo kunokuthile ongakubona nalokho ongakuthanda. Futhi i-Armenia ayiyona into ehlukile kulokhu. Uma sebekule republic, izivakashi ngamunye zizozitholela umsebenzi: umuntu othile uzokwazi ukucabangisisa ngokubuka kwakhe, futhi omunye umuntu angathanda ukuvakasha kunokuzilibazisa ezindaweni zokuzijabulisa, ngokwesibonelo, ekhasino.
Kuphelele, kunezinkinobho eziyisishiyagalombili e-Armenia. Lezi yizikhungo zokugembula iFlamingo, uFaro, iShangri La, iSenator nezinye. Kuzo zonke lezi zikhungo zokugembula, abadlali banikezwa inqwaba yemidlalo yokugembula nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.
Isibonelo, ikhasino << i-Shangri La Yerevan >> ingesinye sezikhungo zokugembula zesimanje kunazo zonke ezweni. Ukungena kwaleli khasino kungu- $ 100 (ipasi linikezwa kuphela abantu abaneminyaka engaphezu kwengama-21), kepha le mali ayenzi nje kuphela izindleko zethikithi lokungena: bashintshaniswa ngamachips, angadlalwa-ke. Ikhasino lifaka amahholo wokudlala amaningi, indawo yokudlela enhle << UMichelangelo Launch >>, ikilabhu leCW labadlali beVIP. Amakhasino ahlala njalo ephethe amalotho ahlukahlukene kanye nemincintiswano ngokuwina imali, uhlelo lwamakhadi amakilabhu anikeza ilungelo lokuthola insizakalo eyengeziwe (ikhishi lamahhala, ukungena mahhala, njll.).
Isakhiwo sekhasino sise-10 km yomgwaqo omkhulu waseYerevan-Sevan, ongabizwa ngokuthi enye yezindawo ezinhle kakhulu e-Armenia. Endaweni yezakhiwo zokuzijabulisa zeShangri La kunendawo yokupaka izimoto, eyenzelwe izimoto eziyi-100. Ngakho-ke, khathazeka ngokuthi bazobashiya kuphi abadlali bezokuthutha akudingeki. Ungafinyelela ekhasino ngetekisi.
Uma ufuna, ungasebenzisa izinsizakalo zesikhungo futhi ufake isicelo sohambo lomdlalo. Kufaka ukuhamba kwamahhala ekhasino (kufaka phakathi izindiza ezivela kwamanye amazwe ane-visa), igumbi lamahhotela lamahhala, insizakalo ye-VIP, u-10% wokulahleka kwansuku zonke kokunye nokunye okuningi.
Amanye amakhasino e-Armenia
Uhambo lokugembula ekhasino yase-Armenia lutholakala futhi ngesikhungo sokugembula "I-Sun Palace" , etholakala eYerevan. Kulesi khasino ungajabula ngokugembula okufana ne-roulette, i-Black jack, amathambo, i-baccarat, i-Caribbean ne-Russian poker, i-video poker, kunemishini engaphezu kwengu-100, njll. Kubalandeli bomdlalo ngamanani amakhulu, igumbi le-VIP liyasebenza .
Konke ukuwina kule khasino kukhokhelwa abaphathi besikhungo ngohlobo lwemali umdlali alukhethayo (i-euro, ama-ruble) .Ungahlinzekwa ngezokuphepha.
Ngaphandle kokugembula, lolu hambo luhlanganisa ukubuka indawo yokubuka indawo ejikeleze i-Yerevan kanye nokuvakashela eLake Sevan.
Kepha ikhasino "Senator" isemngceleni we-Argavand futhi. UTayrov. Kulesi khasino sase-Armenia, kanye nokukhethwa kwamakhasimende, ukhetho olukhulu lokuzijabulisa lunikezwa emahholo wokudlala amaningi, izindawo zokuphumula, ibha. Futhi muva nje, kule nxanxathela yezokuzijabulisa, indawo yokudlela entsha isiqalile ukusebenza, lapho unganambitha khona izitsha zokudla kwase-Armenia, i-Iranian neRussia.
Konke kuzohamba kahle, kepha ngonyaka olandelayo we-2013, ikhasino i-Armenia yanquma ukudlulisela ezindaweni ezikhethekile zokugembula esezishiwo umthetho. Futhi kusukela ekuqaleni konyaka omusha, ukugembula kuzokwenzeka kuphela emingceleni yokuphatha yemiphakathi yaseJermuk, Tsakhkadzor naseSevan.
Izimo ezibophezelekile zokutholakala kwekhasino kuzoba kude nezibhedlela, izinhlaka zikahulumeni, izikhungo zemfundo kanye nezikhumbuzo zamasiko nezomlando ngebanga lamamitha ayi-500 nangaphezulu, kanye nosayizi okuvunyelwene ngawo wendawo yezikhungo zokugembula: yekhasino, kufanele isuke kumamitha-skwele angama-250, nakumageyimu ngokuwina - hhayi ngaphansi kwamamitha-skwele ayi-100. Umqalisi wokushintsha kwendawo yekhasino nguMnyango Wezezimali wase-Armenia.
0.1 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 ze-Armenian Online ze-Casino
2.1 Ukugembula e-Armenia
3 I-Armenia I-casino e-Online ne-Kamera
3.0.1 Imithetho yase-Armenia ngokugembula - isizinda somlando
3.1 Ungaqala kanjani ukudlala i-casino e-inthanethi e-Armenia?
3.1.1 Indawo yase-Armenia kanye nesizinda somlando omfushane
3.1.2 I-Armenia ebalazweni lase-Asia
3.1.3 Ukubuka kwe-Yerevan
3.1.4 Amaqiniso anentshisekelo nge-Armenia nama-Armenia
4 I-Casino yase-Armenia, izikhungo ezingcono kakhulu zokugembula e-Armenia
4.0.1 Amanye amakhasino e-Armenia
ukushubela umdlalo wokuhamba phambili